Ihe E Mere n’Ụbọchị Ndị Eze nke Abụọ 12:1-16
Shaịshak lụsoro Jeruselem agha (1-12)
Mgbe Eze Rehoboam nwụrụ (13-16)
12 Ozugbo aka siri Rehoboam ike n’ọchịchị,+ alaeze ya esiekwa ezigbo ike, ya na ndị Izrel niile hapụrụ Iwu Jehova.+ 2 N’afọ nke ise n’ọchịchị Eze Rehoboam, Shaịshak+ eze Ijipt bịara lụso Jeruselem agha, n’ihi na ha nupụụrụ Jehova isi. 3 Shaịshak ji otu puku ụgbọ ịnyịnya na narị abụọ (1,200) si Ijipt bịa. Puku mmadụ iri isii (60,000) ndị na-agba ịnyịnya, na imirikitiimi ndị agha sokwa ya bịa, ma ndị Libia ma ndị Sọkiyim ma ndị Etiopia.+ 4 O weghaara obodo ndị a rụsiri ike dị na Juda, mechaakwa rute Jeruselem. 5 Shemaya+ onye amụma bịakwutere Rehoboam na ndị isi Juda, ndị gbakọrọ na Jeruselem n’ihi Shaịshak, sị ha: “Jehova kwuru, sị, ‘Unu hapụrụ m. N’ihi ya, mụnwa enyefeekwala unu n’aka Shaịshak.’”+ 6 Ndị isi Izrel na eze wee weda onwe ha ala,+ sị: “Ihe Jehova mere dị mma.” 7 Mgbe Jehova hụrụ na ha ewedala onwe ha ala, Jehova gwara Shemaya, sị: “Ha ewedala onwe ha ala. Agaghị m ebibi ha.+ M ga-anapụta ha n’oge na-adịghị anya. Agaghị m ewesa Jeruselem iwe ma nyefee ha n’aka Shaịshak. 8 Ma, ha ga na-ejere ya ozi, ka ha wee mara ihe dị iche n’ijere m ozi na ijere eze* ndị obodo ọzọ ozi.” 9 Shaịshak eze Ijipt bịara lụso Jeruselem agha. O bukọọrọ akụ̀ dị n’ụlọ Jehova+ nakwa akụ̀ dị n’ụlọ* eze. O buuru ihe niile, ma ọta ọlaedo ndị Solomọn rụrụ.+ 10 Eze Rehoboam wee were ọla kọpa rụọ ọta ọ ga-eji dochie ha. O nyefekwara ha n’aka ndị isi ndị nche,* ndị na-eche ọnụ ụzọ ụlọ eze nche. 11 Mgbe ọ bụla eze bịara n’ụlọ Jehova, ndị nche ahụ na-abata buru ha. Ha na-emechakwa bughachi ha n’ụlọ ndị nche. 12 Ebe ọ bụ na eze wedara onwe ya ala, iwe Jehova na-ewesa ya dajụrụ.+ Ọ laghịkwa ha n’iyi kpamkpam.+ Ihe ọzọkwa bụ na a ka nwere ihe dị mma a na-eme na Juda.+ 13 Eze Rehoboam nọ na-achị, na-emekwa ka ọchịchị ya sie ike na Jeruselem. Rehoboam dị afọ iri anọ na otu mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị afọ iri na asaa na Jeruselem, bụ́ obodo Jehova họọrọ n’ime ebo niile n’Izrel ka a nọrọ na-eto aha ya. Aha nne Rehoboam bụ Neama. Ọ bụ nwaanyị Amọn.+ 14 Ma Rehoboam nọ na-eme ihe ọjọọ, n’ihi na obi ya adịghị n’ime ihe Jehova chọrọ.+ 15 E dere akụkọ gbasara Rehoboam, malite ná mbido ruo ná ngwụcha, n’akwụkwọ. Ọ bụ Shemaya+ onye amụma na Ido+ onye ọhụụ dere ya n’akwụkwọ e dere aha ezinụlọ dị iche iche. Rehoboam na Jeroboam nọkwa na-alụ agha oge niile.+ 16 N’ikpeazụ, Rehoboam nwụrụ otú nna nna ya hà nwụrụ. E likwara ya n’Obodo Devid.+ Abaịja nwa ya+ nọchiri ya, malite ịchị.
^ Na Hibru, “alaeze.”